श्रीमान अरबको खा’डीमा पसिना बगा’उदै बु’ढी अर्कैसँग रमाउदै (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > बिचित्र > श्रीमान अरबको खा’डीमा पसिना बगा’उदै बु’ढी अर्कैसँग रमाउदै (भिडियो सहित)
admin September 9, 2020 September 9, 2020 बिचित्र, रोचक, समाज	0
म दुईटा श्रीमान राख्छु, मान्छ त यो समाज ?
रवीना देशराज समकालीन समाज भन्दा बेग्लै सोच राख्ने ब्यक्तिका रुपमा चिनिन्छिन् । उनी लैंगिकताका विषयमा परम्परागत सोच विपरित धारणा राखेर र आफ्नो वि ,किनी तस्बिर सार्वजनिक गरेर पनि चर्चामा छिन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँगै वि,किनीमा उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएपछि त्यसले ठूलै चर्चा पायो ।उनका छोरा आयुष्मान देशराज पनि अभिनेता हुन् । अभिनेत्री कार्की र आयुष्मान का गसिपहरु पनि मिडियामा छाइरहन्छन् ।
सन्तान जन्माउन बिहे गर्नु नपर्ने धारणा राख्दै आएकी रवीना देशराजसँग प्रचलित सामाजिक ब्यवस्थाका बारेमा चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीको केहि अंश साभार गरेका छौ :- महिला झनबोad,ल्ड हुँदै गएपछि परिवारमा बिखण्डन आइरहेको छ भन्छन्, हो त ?मेरा एकजना आफन्तसँग एकदिन कुरा गर्दैथिएँ ।
कसैले एक्लै जानु भएछ खबर गरेर जानुभएको भए हुन्थ्यो भन्नुभयो । त्यसले लाग्यो समाजमा संस्कारमा हुर्केका र समाज, दुनियाँ बुझेका मान्छे पनि छन् । अहिले पनि भन्छु– हरेक कुरालाई लैंगिकताको नजरबाट मात्र नहेरौं । मेरो छोरोले मलाई विकिनीमा देखेर केहि भन्दैन । बरु कुनमा हजुरलाई सुहाउँछ भनेर ड्रेस खोज्छ, यो लगाउनुस् भन्छ । कपडा लगाउनु, मेकअप गर्नु, राम्रो हुनु, अरुका लगि होइन । आफ्ना लागि हो । म मेरो कुरामा कम्फर्ट छु भने अरुलाई किन चासो ? कुनै छोरीलाई हाफ पाइन्टमा कम्फर्ट लाग्छहोला ।उसले त्यस्तो लगाएर केटालाई आउ, छोउ भनेको त होइन नि ।
अर्को कुरा, पुरुषहरुले झर्नामा छाती थापेर नुहाएको फोटो चाहिँ कुल हुने, त्यस्तो तस्बिर खिच्न कसरी समय निकाल्नु भयो भनेर सोध्ने । महिलाको नुहाएको फोटोमा चाहिँ किन तुच्छ कमेन्ट गर्ने ? पुरुषजस्तै महिला पनि प्रकृतिको क्रिएसन हो भन्ने सत्य कुरा बुझ्नु पर्यो नि । यसको जरो भनेकै हामीले छोरो हुर्काउँदा संस्कार दिन सकेनौं । अब हरेक आमाले बुझ्नु पर्छ– छोरीलाई होइन हरेक छोरालाई संस्कार सिकाएर समाज बदलौं । श्रीमान् क्वारेन्टीनमा नाबालक बच्चा छाडेर श्रीमती बे’पत्ता
अहिले उनलाई उनको परिवार र प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।‘हामी बिचमा कुनै कुराको झगडा भएको थिएन । एक्कासी २१ गते बिहान ३ बजे घरबाट निश्कीएकी उनी आज सम्म पनि सम्र्पकमा नआएको’ उनका श्रीमान दिपक अधिकारीले बताए ।
म रोजगारीको लागि भारतको न्यू दिल्लीमा बस्छु । लकडाउन भए पछि घर आए । रोजगारीको लागि गाउँ घर चाहारेर फर्कदा श्रीमती घर नाबालक छोडेर बेपत्ता भईछिन्’ उनका श्रीमान दिपकले भने ।बेपत्ता महिलाको ५ बर्षे छोरालाई समेत घरमै छाडेर हिडेकी हुन् ।
धादिङ जिल्ला ज्वालामुखी गाउँपालिका ४ ढोला मण्डली माईती भएकी उनी कहाँ गईन अहिले सम्म पत्तो पाउन नसकिएको उनको परिवारले जानकारी दिएको छ ।?०७२ सालमा मागि विवाह गरेका दिपक र रिता बिच अहिले सम्म पनि झै झगडा नभएको उनका छिमेकी बताए ।
ससुरी तर्फबाट दैनिक जसो फोन गरेर छोरीको लास वा सास चाहिने भन्दै फोनमा धम्की दिने गरेको पिडित दिपकले बताए । परिवार संग भिन्न बसेका दिपक अहिले ५ बर्षे बालकको हेरचाह गर्दै श्रीमती घर फर्किने आशामा बसेका छन् ।
महिला बेपत्ता भए पछि दिपकले ताङलीचोकमा रहेको प्रहरीमा साउन २५ गते नै श्रीमती बेपत्ता भएको उजुरी दर्ता गराएका थिए । बेपत्ता भनिएकी रिताले अहिले पनि ९८०५२१९८६९ नम्बरको मोबाईल उठाएता पनि आफु रहेको स्थान खुलाउन चाहदिनन् । यो खबर हिमालिदैनिक डटकममा छ।
गीतको बिषयलाइ लिएर गायक दुर्गेश थापा फेरि चर्चामा, अधिबक्ताका अनुसार जेलसम्म हुन सक्ने!